Wiilkii Ukunta ku Weeraray Xildhibaankii Cunsuriga ahaa Oo Dunida Caan ka Noqday (Sawirro) | Awdalmedia.com
Wiilkii Ukunta ku Weeraray Xildhibaankii Cunsuriga ahaa Oo Dunida Caan ka Noqday (Sawirro)
Sun 17 March 2019.
Wiil u dhashay dalka Australia oo diiday cunsuriyadda siyaasi u dhahshay Australia ayaa mudda gaaban ku soo caan baxayy, iyadoo loo bixiyey naaneys cusub oo ah Egg boy oo la macno ah (Wiilkii ukunta).
Wiilkan 17 jirka ah ee lagu magacaabo Wiil Konley wuxuu baraha bulshada uu ku soo caan baxay kaddib marki uu ka soo horjeestay hadalla cunsuriyad ah oo uu ku hadlay Senetar Freser.
Senetarka oo warbaahinta kala hadlayey xasuuqi foosha xumaa ee loo geystay muslimiinti Newzealand ayaa sheegay “iney dhibaatada dhacday sabab u yihiin dadka soo galootiga ah ee ku soo qulqulaya Newzeland iyo Australia.
Wiilkan yar oo hadalka Senetarka si weyn uga xumaaday ayaa ukun quruntay madaxa kaga jabiyo kaddibna waxaa Will xabsiga u taxaabay Booliska.
Booliska mar ay wax ka weydiiyeen inuu ka qoomameynayo falka uu sameeyey iyo inkale wuxuu sheegay inuu marna ka qoomameyneyn oo uu aad ugu faraxsan yahay mudanahan cunsuriga waxa uu ku sameeyey.
Haddana Will Konley ficilka geesinimada leh oo uu sameeyey ayuu sumcad aad u weyn kaga helay baraha bulshada iyada oo loogu yeedhay ‘Geesi’.
Saacado gudahood Will wuxuu boggiisa Twitterka uu ka helay inka badan 240,000 ayaa ku soo xiratay, iyaga oo weliba ay taageerayaashiisu sheegeen lacag uu ukumo kale ku soo iibsado qareenna u doodana uu ku qabsado.
Akaawn bangi oo wiilkaasi magaciisa lagu furayna waxaa saacada gudahood taageerayaashiisa ay u soo geliyeen $25,000 oo doolar.
Will konley magaca iyo lacag iyo geesinimaba inuu isku helay ayaa si weyn looga hadal hayaa barah bulshada caacaalamka.